MUUQAAL: Soomaaliya Gurmad Caawimo ah ka Qaybisay Koonfurta Suudaan | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
MUUQAAL: Soomaaliya Gurmad Caawimo ah ka Qaybisay Koonfurta Suudaan
Muqdisho ( Kalshaale ) Safaaradda Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee dalka Koofurta Sudan oo kaashaneysa jaaliyadda wadankaasi ayaa 25 tan oo deeq gargaar ah oo ay ugu gurmanayaan dadka ku hanti beelay fatahaadaha ka dhacay wadankaasi ku wareejiyay dowladda Dalkaasi.
Farmaajo caawimaduu bixinayo muu futadiisa ku qarsado!
Waxay qaybiyeen qaraxyo ileen dadkoodiibaa bakhtiyaaye subxaanalaah been badanaa
Nin baa laga sheegay.
“Lacagtaan maqdarad geynayee magac ku doonaayo
Alla magane maan hooyadey maro u soo siisto”
Haatan bal inta aan gaalo madow cawaan ah magac ka raadsanayo ma qof soomaaliya oo baahan baan waayey
Waxaad aad u baahan thy hadaad bixiso waa sharaf
Waa hubaal in dadkeenu waxyaalihi aasaasiga ahaa ay baahi weyn u qabaan, oo ayagu mudnaanta leeyihiin. Hadana markii dhinac kale laga eego, wiil baa aabihii waxuu Ku yiri aabow wax ana waxtar ii ah adna aan wax kaa dhimayn maad hooyo Ku tiraahdid, odaygi waxuu yiri maxaan hooyo u sheegaa, wiilki waxuu yiri waxaad tiraahdaa wiilka haruubka u buuxi.
Hada 25:ton oo oo waliba ay ganacsatada South Sudan Ka ganacsada wax Ka bixiyeen, xoogaa magacana noo soo jiidaya ma xumo.